11 September 2012 / Download
**Pin Heel Surfer **single ထွက်မယ်ဆိုကတည်းက Facebook မှာ sample လေးတွေ ထွက်နေတာ၊ နားထောင်ကြည့်တော့လည်းမိုက်တယ်။ အခုတော့မှပဲ mp3 ကို ရှာတွေ့တော့တယ်။ ဒါပေမယ့် Officially Release ကတော့ ခုလာမည့် September 12 မှဆိုတော့ စောင့်ရအုံးမှာပေါ့။ ဝယ်လို့တော့ ရမှာမဟုတ်ဘူး ဒီကနေ။ ဒီလိုပဲ ပြန်တင်ပေးမယ့်သူကို စောင့်ရမှာပေါ့။ လောလောဆည် ရှာတွေ့ထားတာက PV က သီချင်းကို mp3 format convert လုပ်ထားတာ ဆိုပေမယ့် Quaility ကတော့ ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာတော့ မရှိဘူး။ ခက်ခက်ခဲခဲရှာလိုက်ရတယ်။ -_-”
[![Pin Heel Surfer](http://res.cloudinary.com/dgx38ho5w/image/upload/v1427432365/22234-andltahrefhttpwwwjpo-1s2o_sysnro.jpg "Pin Heel Surfer")](http://res.cloudinary.com/dgx38ho5w/image/upload/v1427432365/22234-andltahrefhttpwwwjpo-1s2o_sysnro.jpg)
PV ကတော့ Low Quality တွေတော့ တွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လူက အကျင့်ပျက်နေပြီ။ HD ရှိတယ်ဆိုတာသိရင် HD ကို မရှာမကရှာ Download ဆွဲချင်တုန်း။ အခုလည်း Download ဆွဲနေတာ .part1 ပဲပြီးသေးတယ်။ 190MB , ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခုကတော့ 90MB ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ သိပ်ကြာမှာမဟုတ်ဘူး။ Quality ကတော့ 1080P ပဲ။ xD
Download via Minus
These are the Scene of the SCANDAL anime series that was on their official site, www.SCANDAL-4.com. Twelve 1-minute fictional shorts about the real-life Japanese band SCANDAL. That’s really funny clips